अस्पतालको बेडमा थलिएकी श्रीमतीको स्याहारमा जुटेका बसन्तलाई त्यसबेला असाह्यै पी डा हुन्छ, जब श्रीमतीले ‘मलाई मा रि दिनुस्’ भन्छिन् (भिडियो हेर्नुस्) – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /Video/अस्पतालको बेडमा थलिएकी श्रीमतीको स्याहारमा जुटेका बसन्तलाई त्यसबेला असाह्यै पी डा हुन्छ, जब श्रीमतीले ‘मलाई मा रि दिनुस्’ भन्छिन् (भिडियो हेर्नुस्)
अस्पतालको बेडमा थलिएकी श्रीमतीको स्याहारमा जुटेका बसन्तलाई त्यसबेला असाह्यै पी डा हुन्छ, जब श्रीमतीले ‘मलाई मा रि दिनुस्’ भन्छिन् (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं । ट्रमा सेन्टरको पाँचौं तलामा रहेको ५ सय १४ नम्बर बेडमा चेली तामाङ एकोहोरो टोलाइरहेकी छिन् । छेउमै अडेस लागेका छन् उनका श्रीमान बसन्त कुमार ठाकुरी। चेली हलचल गर्न सक्दिनन् । बसन्तलाई त्यसबेला असाह्यै पी डा हुन्छ, जब श्रीमतीले ‘मलाई मा रि दिनुस्’ भन्छिन् । उनी आफैलाई प्रश्न गर्छन् ,’म मेरै श्रीमतीलाई कसरी मा र्न सक्छु ?
काभ्रे भकुण्डेबेसीका बसन्त र सिन्धुपाल्चोक मुडेकी चेलीको भेट १५ वर्षअघि काठमाडौंमै भएको थियो । त्यतिबेला बसन्त लोकन्थलीमा मार्केटिङ कम्पनीको गाडी चलाउँथे, चेली जडिबुटीमा दाइको होटलमा खाना पकाउँथिन् । होटलमा जाँदाआउँदा भएको चिनजान प्रेममा बदलियो । त्यसको दुई वर्षमा बिहे गरे । उनीहरुको बिहे घर परिवारलाई चित्त बुझेन ।
परिवारले नस्वीकारे पनि उनीहरुले आफ्नो संसार बसाईसकेका थिए । आठ वर्षकी छोरी समेत छन् उनीहरुको । सानो घर बनाउने र छोरीको भविष्य पनि उज्जवल बनाउने सपना बोकेर विदेशीएका बशन्तको सबै सपना चक नाचुर भयो । चेलीलाई मोटरसाइकलले ठ क्कर दिएर घाइते बनाए पछि उनी विदेशवाट फर्केर आए । अहिले भएको सम्पत्ती पनि सकियो ।
२०७३ साल चैत २५ गते मलेसियाबाट फर्केका उनी सिकै नर्भिक अस्पतालमा अ चेत अवस्थामा रहेकी श्रीमतीलाई भेट्न पुगे । नर्भिक अस्पतालमा ४५ दिनको उपचारपछि चेलीलाई ट्रमा सेन्टरमा ल्याइएको थियो । ट्रमामा ६ महिना आईसीयुमा राखेपछि ५१४ नम्बर बेडमा सारिएको हो ।
उनको उपचारमा संलग्न डाक्टरले ‘मेरुदण्डको दुईवटा नशा च्या पिएको छ’ भनेको बसन्तले बुझेका छन् । श्रीमती चेलीको उपचारमा बसन्तले कुनै कसर छाडेका छैनन् । तर, एकातिर स्वास्थ्यमा सुधार भएको छैन भने अर्कोतिर आर्थिक अभावले पनि थि च्दै लगेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको सभामुख पद रिक्त रहेको अवस्थामा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० को संसदीय दलको बैठकमा उपसभामुख डा।शिवमाया तुम्बाहाङफेलाई राजीनामा गराएर दुवै पदमा निर्वाचन गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
संघीय संसद ९प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा० को पाँचौ अधिवेशन शुरु हनुअघि आज नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा सम्पन्न नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा दलका उपनेता एवं पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङले उपसभामुख तुम्बाहाङफे राजीनामा दिनुपर्ने र संविधानअनुसार सभामुख र उपसभामुखमध्ये फरक–फरक लिङ्ग र दलबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
आजको पहिलो बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र र शोक प्रस्तावबोहक अन्य कार्यसूचीमा प्रवेश नगर्नुले यही पुस ११ गतेका लागि तोकिएको दास्रो बैठकमा सभामुख निर्वाचनको मिति तोकिने देखिएको छ । सभामुख निर्वाचनको मिति तोकिएर उम्मेदवारको मनोनयन हुनुपूर्व उपसभामुख तुम्बाहाङफेलाई राजीनामा दिन पार्टीले निर्देशन दिने स्थिति हुन सक्ने नेकपाका सांसद् शेरबहादुर तामाङले बताए । सभामुखको निर्वाचन हुने बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने र सभामुख चयनपछि उपसभामुखको निर्वाचनको कार्यसूची आउनेछ ।
सांसद् तामाङले भने उपसभामुख तुम्बाहाङफे पदमा निर्वाचित भएपछि पार्टीको सदस्य नरहेकाले सभामुख र उपसभामुखमा फरक–फरक दलको कुरा उनको हकमा लागू नहुने तर्क गरे । संसद् बैठकबाट बाहिरिनुभएका उपनेता नेम्वाङलाई सभामुख पदमा पुनः तपाईँको सम्भावना हो भन्ने प्रश्नमा उनले हाँस्दै ठट्यौली शैलीमा भनिन्, ‘पत्रकारले सबै बनाइसके, त्यसमा मैले हस्ताक्षर गर्ने त होला नि ’ उपसभामुख तुम्बाहाङफेले आफ्नो अनुभव र क्षमताका आधारमा रिक्त सभामुखमा दावी रहने जनाउँदै आएकी छन् ।
सारा नेपालीलाई निकै खुशीको खबर : नेपालमै पेट्रोलियम पदार्थ निकाल्ने काम सुचारु, चीनले दियो साथ, मोदीको बेहाल (भिडियो सहित हेर्नुहोस्)
५ रुपैयाको खाना बन्द गर्दिएपछि कुमारले गरे यस्तो काम , हेर्नुस यस्तो मान्छेको खोजीमा कुमार ,अब के होला ? (भिडियो सहित)
पैसा पठाउने जयन्ती राई पहिलो पटक मिडियामा, पुण्यको खुल्यो यस्तो र*हश्य ! के हो त १५ हजार का*ण्ड ? (हेर्नुस् भिडियो)